Izindaba - Yiziphi izinqubo imikhiqizo ye-aluminium edlule kuzo kusuka ezintweni zokusetshenziswa kuya ekucubunguleni nasekubunjweni?
Yiziphi izinqubo imikhiqizo ye-aluminium edlule kuzo kusuka ezintweni zokusetshenziswa kuya ekucubunguleni nasekubunjweni?
Yiziphi izinqubo imikhiqizo ye-aluminium edlule kuzo kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya ekucubunguleni nasekubumbeni?
Aluminium ngokunemba ekubunjweni kungenziwa ngemikhiqizo ye-aluminium. Yize izikali nomumo wehlukile, usayizi oqondile, ukubukeka okuhle nokusebenza okuzinzile kungazuzisa abantu nabantu, futhi kwakheke umbala ohlukile wokuphila. Ezimpilweni zethu, kuhlale kunenkampani yemikhiqizo ye-aluminium, njengama-aluminium plate, amashubhu e-aluminium, amafreyimu e-aluminium, amagobolondo e-aluminium, njll, ahlanganisa zonke izici zempilo yethu. Zonke zenziwe nge-aluminium ngokucutshungulwa ngokunemba, izinto zokusetshenziswa ezikhethiwe ziyefana, kepha inkambu yokugcina yohlelo nendima kuzohluka, kwakheke imikhiqizo ehlukahlukene ye-aluminium, futhi lokhu kwenziwa ngemikhiqizo ye-aluminium Enqunywe ukugeleza kokusebenza.
Ukuhamba kokucubungula kwemikhiqizo ye-aluminium kunquma ukuthi iyiphi indima okufanele iyidlale noma ukuthi iyiphi indima okufanele iyidlale ngemuva kokubumba. Ngakho-ke, ukucutshungulwa kwemikhiqizo ye-aluminium kubaluleke kakhulu. Ake sibheke imikhiqizo ye-aluminium kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya ekubunjweni. Inqubo enolwazi.
1.Die ekubunjweni udini
Uhlobo ngalunye lomkhiqizo we-aluminium lunezidingo ezithile zosayizi, futhi kufanele lunembe futhi lube yinkimbinkimbi ukuze lusetshenziswe kalula. Lokhu kudinga ukuthi abakhiqizi bokucubungula umkhiqizo we-aluminium babe nobuchwepheshe bokufa ekubunjweni kobuchwepheshe kanye namandla okuvula isikhunta wokuvula ukukhiqiza ngobuningi nokukhiqiza okuCwengileko. Ukufakwa kwe-die-casting ukufudumeza i-aluminium ekushiseni okuthile, futhi ngemuva kokuthi i-aluminium alloy incibilike, ifakwe ku-isikhunta, bese ingakhishwa esikhunjeni ngemuva kokupholisa futhi yakhe ukwakha imikhiqizo ye-aluminium enezimo eziyinkimbinkimbi nobukhulu obuqondile.
Ngemuva kokukhiqizwa kwemikhiqizo ye-aluminium, ubuso bensimbi buzoba nokuqina, ukungalingani, ukuklwebheka, ama-burrs, izinhlayiya, njll. Imikhiqizo enjalo ye-aluminium ayisihle noma iphelele, ngakho-ke imikhiqizo ye-aluminium idinga ukupholishwa ngemuva kokwakhiwa. Ingaphezulu lipholile. Izindlela ezivamile zokupholisha zibandakanya ukupholisha ngomshini, ukupholisha amakhemikhali nokupholisha i-electrolytic. Imikhiqizo ye-aluminium epholishiwe ayinamaphutha, indawo ebushelelezi, ebushelelezi, nehlanzekile, njengesibuko.
Imikhiqizo ye-Aluminium ihlukaniswa nobumba, ukhuni, amapulasitiki nezinye izinto, hhayi kuphela ngokuqina okuphezulu kwensimbi uqobo, kepha nangokuthungwa kwensimbi okuyingqayizivele kwemikhiqizo ye-aluminium uqobo. Imikhiqizo ye-Aluminium ingathandwa empilweni, futhi ukuthungwa kwensimbi kubaluleke kakhulu. Ubuhle bomoya ozolile olethwe ngabantu, futhi inqubo yokudweba ivame ukusetshenziselwa ukuthuthukisa ubuhle bensimbi bemikhiqizo ye-aluminium ngenkathi kucutshungulwa futhi kwakhiwa imikhiqizo ye-aluminium.
Ukudwetshwa kwentambo nokupholisha kukhona konke ukwelashwa okucwengile ebusweni bemikhiqizo ye-aluminium ukwenza ngcono ubuhle, kepha umehluko phakathi kokudweba ngocingo nokupholisha ukuthi kwakha imigqa emisha engxenyeni yensimbi, kushintsha ukushiyeka kobuso bangempela noma kusetshenziswe imigqa ehlukile . Imigqa ejwayelekile futhi efanayo yokuthuthukisa ukuthungwa kwensimbi nobuhle bemikhiqizo ye-aluminium.
Into ekhathaza kakhulu ngemikhiqizo ye-aluminium empilweni yansuku zonke i-oxidation nokugqwala. Uma sezonakele, azizukuthinta ama-aesthetics kuphela ngenxa yokugqwala, kepha nezingxenye ezonakalisiwe zizoba ntekenteke futhi zithinte ukuzinza okuphelele. Ukwenza i-anodizing kubalulekile lapha. Inqubo. I-Anodizing inqubo yokwelashwa ebusweni engagcini nje ngokuthuthukisa ukubonakala kwemikhiqizo ye-aluminium, kepha futhi nokumelana kwayo nokugqwala nokugqoka ukumelana nayo. Ngokubeka izinto ze-aluminium ku-electrolyte ehambisanayo nezimo ezithile zenqubo, kufakwa amandla kagesi ebusweni bemikhiqizo ye-aluminium Kwakhiwa ifilimu ye-oxide. Abakhiqizi bokulungiswa komkhiqizo we-Aluminium bangaxubanisa ingaphezulu lemikhiqizo ye-aluminium ngemibala ehlukahlukene ngesikhathi senqubo yokugcotshwa, ukuze imikhiqizo ye-aluminium ibe nezikhombisi-ndlela eziningi zokubumba ngokubukeka, futhi ngasikhathi sinye, ungqimba lwe-oxide lukhulu futhi akulula ukuwa, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ye-aluminium izinzile futhi ihlala isikhathi eside.
Imikhiqizo ye-aluminium esihlangana nayo empilweni yethu yansuku zonke ayiqinile nje kuphela futhi ihlala isikhathi eside, kodwa futhi iyinhle futhi yinhle. Ukuze ufeze umphumela onjalo, awunakwehlukaniswa nenqubo yokucubungula nokubumba esebenza kahle ngumenzi. Vele, izinqubo ezibalulwe ngenhla akuzona zonke, abakhiqizi kufanele bacabange Ukukhiqiza zonke izinhlobo zemikhiqizo ye-aluminium, ukukhetha ubuchwepheshe nakho kufanele kubhekwe. Noma kunjalo, kuhlala kunjalo. Ukulingiswa ngokucophelela nokuphishekela ikhwalithi kuyisisekelo sokuthi abakhiqizi kufanele basekele ekukhiqizeni imikhiqizo ye-aluminium.